Iwebhusayithi ye-ExoSpecial.com ngumsebenzi onelungelo lokushicilela le-ExoSpecial. Iimpawu ezithile zeSayithi zinokuthi zixhomekeke kwizikhokelo ezongezelelweyo, imigaqo, okanye imigaqo, eya kuthunyelwa kwiSayithi ngokumalunga neempawu ezinjalo.
Le Miqathango yokuSetyenziswa ichaze imigaqo ebophelelayo ngokusemthethweni kunye neemeko ezongamela ukusetyenziswa kwakho kweSiza. NGOKUFIKELELA KWISIZA, UYATHOBELA LE MIGAQO kwaye umele ukuba unegunya namandla okungena kule Miqathango. KUFUNEKA UBE UBUNCINANE IMINYAKA eyi-18 UKUFUMANA INDAWO. UKUBA AKUVUMANI NAYO NAYIPHI NA LE MIGAQO, SUKU YISEBENZISA INDAWO.
Ngokuxhomekeke kule Migaqo. I-ExoSpecial ikunika imvume engadluliseliyo, engakhethiyo, enokurhoxiswa, enomda welayisenisi yokufikelela kwiSiza kuphela kusenzelwa wena buqu, usetyenziso olungarhwebiyo kwaye ikwalela ngokungqongqo naluphi na uhlobo lokukhuhlwa kwedatha.
Izithintelo ezithile. Amalungelo owamkele kuwe kule Migaqo axhomekeke kwezi zithintelo zilandelayo: (a) awuyi kuthengisa, uqeshise, uqeshise, udlulise, wabele, usasaze, ubambe, okanye usebenzise kakubi iSayithi; (b) awuyi kutshintsha, wenze imisebenzi ephuma kuyo, udibanise, ubuyisele umva uqokelele okanye ubuyisele umva injineli nayiphi na indawo yeSiza; (c) awuyi kungena kwiSiza ukuze wakhe iwebhusayithi efanayo okanye enokhuphiswano; kwaye (d) ngaphandle kokuba kuchaziwe apha, akukho nxalenye yeSiza enokukhutshelwa, iphinde ikhutshwe, isasazwe, iphinde ikhutshwe, ikhutshelwe, ikhutshelwe, iboniswe, iposwe okanye idluliselwe nangaluphi na uhlobo okanye nangayiphi na indlela ngaphandle kokuba kuboniswe ngenye indlela, naluphi na uhlobo lokukhululwa, uhlaziyo, okanye Olunye ukongezwa ekusebenzeni kweSiza kuya kuba phantsi kwale Migaqo. Onke amalungelo okushicilela kunye nezinye izaziso zokuthengiswa kwesi siza kufuneka zigcinwe kuzo zonke iikopi zazo.
Inkampani inelungelo lokutshintsha, ukunqumamisa, okanye ukuyeka iSiza kunye okanye ngaphandle kwesaziso kuwe. Uvumile ukuba iNkampani ayizukubekwa tyala kuwe okanye kulo naliphi na iqela lesithathu ngalo naluphi na utshintsho, ukuphazamiseka, okanye ukupheliswa kweSiza okanye naliphi na icandelo.
Akukho nkxaso okanye iSondlo. Uyavuma ukuba iNkampani ayizukuzibophelela ukuba ikunike nayiphi na inkxaso enxulumene neSiza.
Ngaphandle kwaso nasiphi na isiqulatho somsebenzisi onokuthi usinike, uyazi ukuba onke amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, kuquka amalungelo okushicilela, amalungelo awodwa omenzi wechiza, iimpawu zorhwebo, kunye neemfihlo zorhwebo, kwiSayithi kunye nomxholo wayo ngababoneleli beNkampani okanye beNkampani. Qaphela ukuba le Miqathango kunye nokufikelela kwiSayithi akukuniki nawaphi na amalungelo, isihloko okanye umdla okanye kuwo nawaphi na amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, ngaphandle kwamalungelo okufikelela okulinganiselweyo achazwe kwesi siVumelwano. Inkampani kunye nabanikezeli bayo bawagcine onke amalungelo anganikwanga kule Miqathango.
Amakhonkco omntu wesithathu kunye neeNtengiso; Abanye abasebenzisi
Amakhonkco oLuntu lweSithathu kunye neeNtengiso. ISayithi sinokuqulatha amakhonkco kwiiwebhusayithi zomntu wesithathu kunye neenkonzo, kunye / okanye ukubonisa iintengiso zeqela lesithathu. Unxulumano olunjalo lweQela leSithathu kunye neeNtengiso azikho phantsi kolawulo lweNkampani, kwaye iNkampani ayinaluxanduva lwalo naluphi na uQhagamshelwano lweQela leSithathu kunye neeNtengiso. Inkampani ibonelela ngokufikelela kolu qhagamshelo lweQela leSithathu kunye neeNtengiso kuphela njengendlela elula kuwe, kwaye ayijongi, yamkele, ibeke iliso, ivume, iwaranti, okanye yenze naluphi na umelo ngokubhekiselele kuQhagamshelwano lweQela leSithathu kunye neeNtengiso. Ukusebenzisa kwakho onke amakhonkco eQela leSithathu kunye neeNtengiso ngomngcipheko wakho, kwaye kufuneka usebenzise inqanaba elifanelekileyo lokulumka kunye nengqiqo ekwenzeni oko. Xa ucofa kulo naluphi na uQhagamshelwano lweQela leSithathu kunye neeNtengiso, imigaqo nemigaqo-nkqubo esebenzayo yomntu wesithathu iyasebenza, kubandakanywa ubumfihlo bomntu wesithathu kunye neendlela zokuqokelela idatha.
Abanye abasebenzisi. Umsebenzisi ngamnye weSayithi unoxanduva kuphela kuyo nayiphi na kunye nayo yonke imixholo yayo yoMsebenzisi. Kuba asikulawuli uMxholo woMsebenzisi, uyavuma kwaye uyavuma ukuba asinaluxanduva lwawo nawuphi na uMxholo woMsebenzisi, nokuba unikwe nguwe okanye ngabanye. Uyavuma ukuba iNkampani ayisayi kuba noxanduva kuyo nayiphi na ilahleko okanye umonakalo owenziwe ngenxa yayo nayiphi na intsebenziswano.
Uyikhulula kwaye uyikhuphe ngonaphakade iNkampani kunye namagosa ethu, abasebenzi, iiarhente, abalandela, kunye nokwabela ukusuka, kwaye ngoku uyeke kwaye uyeke, ingxabano nganye yangaphambili, yangoku neyexesha elizayo, ibango, impikiswano, imfuno, ilungelo, uxanduva, ityala, isenzo kunye nonobangela wesenzo salo lonke uhlobo kunye nendalo, eye yavela okanye evela ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo ngaphandle, okanye enxulumene ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo, kwiSiza. Ukuba ungumhlali waseKhalifoniya, uyayeka icandelo lekhowudi yaseCalifornia engu-1542 ngokunxulumene noku kungasentla, othi: "ukhululo jikelele aludluli kumabango angawaziyo umbolekisi okanye arhanela ukuba akhona ngokuthanda kwakhe ixesha lokukhululwa, ekuthi ukuba iyaziwa nguye imele ibe yachaphazela ngokubonakalayo ukuhlawulwa kwakhe nomtyali."
Iicookies kunye neeBheikhoni zeWebhu. Njengayo nayiphi na enye iwebhusayithi, i-ExoSpecial isebenzisa 'icookies'. Ezi kuki zisetyenziselwa ukugcina ulwazi oluquka izinto ezikhethwa ngabatyeleli, kunye namaphepha akwiwebhusayithi athe undwendwe lwafikelela kuyo okanye alundwendwelayo. Ulwazi lusetyenziselwa ukwenza amava abasebenzisi ngokulungelelanisa umxholo wethu wekhasi lewebhu ngokusekelwe kuhlobo lwesikhangeli seendwendwe kunye/okanye olunye ulwazi.
Isiza sibonelelwe ngesiseko "njengoko sinjalo" kwaye "njengoko sikhoyo", kwaye inkampani kunye nababoneleli bethu ngokucacileyo bayayikhanyela nayiphi na iwaranti kunye neemeko zalo naluphi na uhlobo, nokuba luchaziwe, luchaziwe, okanye lusemthethweni, kubandakanya zonke iziqinisekiso okanye iimeko zokurhweba. , ukomelela ngenjongo ethile, isihloko, ukonwaba okuzolileyo, ukuchaneka, okanye ukungonakali. Thina kunye nabanikezeli bethu asiqinisekisi ukuba indawo iya kuhlangabezana neemfuno zakho, iya kufumaneka ngokungaphazamisekiyo, ngexesha elifanelekileyo, ngokukhuselekileyo, okanye isiseko esingenaziphene, okanye siya kuchaneka, sithembeke, singenazo iintsholongwane okanye enye ikhowudi eyingozi, epheleleyo, esemthethweni. , okanye ikhuselekile. Ukuba umthetho osebenzayo ufuna naziphi na iziqinisekiso ngokubhekiselele kwisiza, zonke ezo ziqinisekiso zithintelwe kwixesha leentsuku ezingamashumi alithoba (90) ukusuka kumhla wokusetyenziswa kokuqala.
Eminye imimandla ayikuvumeli ukukhutshelwa ngaphandle kweziqinisekiso ezichaziweyo, ke oku kubekelwa bucala kungasetyenziswa kuwe. Eminye imimandla ayikuvumeli ukusikelwa umda kwithuba elingakanani iwaranti echaziweyo ithatha ixesha elide, ngenxa yoko olu thintelo lungasasebenzi kuwe.
Ukuya kuthi ga kwinqanaba elivunyelwe ngumthetho, akukho nkampani okanye abathengisi bethu baya kuba noxanduva kuwe okanye kuye nawuphi na umntu wesithathu ngayo nayiphi na inzuzo, idatha elahlekileyo, iindleko zokuthengwa kweemveliso ezibambeleyo, okanye nayiphi na indlela engangqalanga, elandelwayo, engumzekelo, eyenzekayo, ukonakaliswa okhethekileyo okanye ukohlwaywa okuvela okanye okunxulumene nale migaqo okanye ukusebenzisa kwakho, okanye ukungabinakho ukusebenzisa indawo nokuba inkampani icetyisiwe malunga nokwenzeka kolo monakalo. Ukufikelela kunye nokusetyenziswa kwesiza kungokubona kwakho kunye nomngcipheko, kwaye uya kuba noxanduva lwakho kuphela kuwo nawuphi na umonakalo kwifowuni yakho okanye inkqubo yekhompyuter, okanye ukulahleka kwedatha okubangelwa kuko.
Ukuya kuthi ga kwelona nqanaba livunyelweyo ngumthetho, ngaphandle kwayo nayiphi na into echaseneyo nequlathwe apha, uxanduva lwethu kuwe ngalo naluphi na ulwaphulo-mthetho oluvela okanye olunxulumene nesi sivumelwano, luya kuthi ngamaxesha onke lilinganiselwe kumashumi amahlanu eedola zaseMelika (thina $ 50). Ubukho bamabango angaphezu kwesinye abuyi kuwandisa lo mda. Uyavuma ukuba abathengisi bethu abayi kuba nabutyala balo naluphi na uhlobo oluvela okanye olunxulumene nesi sivumelwano.
Eminye imimandla yolawulo ayikuvumeli ukusikelwa umda okanye ukukhutshelwa ngaphandle kuxanduva lomonakalo owenzekileyo okanye obangelwe sisiphumo, ke oku kusikelwa umda okanye ukukhutshelwa ngaphandle akunakusebenza kuwe.
Ukupheliswa kunye nokupheliswa. Ngokuxhomekeke kweli Candelo, le Miqathango iya kuhlala isebenza ngokupheleleyo kwaye isebenze ngelixa usebenzisa iSayithi. Sinokunqumamisa okanye siphelise amalungelo akho okusebenzisa iSayithi nangaliphi na ixesha ngaso nasiphi na isizathu ngokubona kwethu, kubandakanywa naluphi na ukusetyenziswa kweSayithi ngokwaphula le Miqathango. Emva kokupheliswa kwamalungelo akho phantsi kwale Miqathango, iAkhawunti yakho kunye nelungelo lokufikelela kunye nokusebenzisa iSayithi liya kupheliswa ngoko nangoko. Uyaqonda ukuba nakuphi na ukupheliswa kweakhawunti yakho kunokubandakanya ukucinywa koMxholo woMsebenzisi ohambelana neAkhawunti yakho koovimba bethu bolwazi. Inkampani ayisayi kuba noxanduva kuwe ngalo naluphi na ukupheliswa kwamalungelo akho phantsi kwale Miqathango.
Inkampani iyabuhlonipha ubukrelekrele babanye kwaye icela ukuba abasebenzisi beNdawo yethu benze okufanayo. Ngokunxulumene neNdawo yethu, siye samkela kwaye sasebenzisa umgaqo-nkqubo ohlonipha umthetho welungelo lokushicilela obonelela ngokususwa kwazo naziphi na izinto eziphula umthetho kunye nokupheliswa kwabasebenzisi beSayithi yethu ye-Intanethi abaphinda baphule amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, kubandakanya namalungelo okushicilela. Ukuba ukholelwa ukuba omnye wabasebenzisi bethu, ngokusetyenziswa kweNdawo yethu, wophula ngokungekho mthethweni ilungelo lokushicilela (s) emsebenzini, kwaye unqwenela ukuba izinto ezityholwa ngokwaphula umthetho zisuswe, olu lwazi lulandelayo ngohlobo lwesaziso esibhaliweyo (ngokulandela imiqathango yokwaphula umthetho). ukuya kwi-17 USC § 512 (c)) kufuneka ibonelelwe:
utyikityo lwakho lomzimba okanye elektroniki;
Ukuchongwa kwemisebenzi enamalungelo obunini obanga ukuba wophulwe umthetho;
Ukuchongwa kwemathiriyeli kwiinkonzo zethu obanga ukuba kuyaphula kwaye usicela ukuba sisuse;
ulwazi olwaneleyo lokusivumela ukuba sifumane izinto ezinjalo;
idilesi yakho, inombolo yomnxeba, nedilesi ye-imeyile;
ingxelo yokuba unokholo oluhle lokuba ukusebenzisa izinto ezichasayo akugunyaziswanga; kwaye
Isiteyitimenti sokuba ulwazi olukwisaziso luchanekile, kwaye phantsi kwesigwebo sobuxoki, ukuba ungumnini welungelo lokushicilela ekuthiwa wophulwe umthetho okanye ugunyazisiwe ukuba wenze egameni lomnini welungelo lokushicilela.
Nceda uqaphele ukuba, ngokulandela i-17 USC § 512 (f), nakuphi na ukuchaneka kwezinto eziphathekayo kwisaziso esibhaliweyo ngokuzenzekelayo kuxhomekeke kwicala elikhalazayo kuwo nawuphi na umonakalo, iindleko kunye neentlawulo zegqwetha ezenziwe sithi ngokunxulumene nesaziso esibhaliweyo kunye nesityholo. ukophulwa kwelungelo lokushicilela.
Le Miqathango ixhomekeke ekuhlaziyweni ngamaxesha athile, kwaye ukuba senza naluphi na utshintsho olumandla, sinokukwazisa ngokukuthumelela i-imeyile kwidilesi ye-imeyile yokugqibela osinike yona kunye/okanye ngokuthumela ngokucacileyo isaziso sotshintsho kwiinkqubo zethu. Isiza. Unoxanduva lokusinika eyona dilesi ye-imeyile yangoku. Kwimeko apho idilesi ye-imeyile yokugqibela osinike yona ayisebenzi ukuthunyelwa kwethu i-imeyile eneso saziso nangona kunjalo iya kuba sisaziso esisebenzayo sotshintsho oluchazwe kwisaziso. Naluphi na utshintsho kule Miqathango luya kusebenza kwasekuqaleni kweentsuku ezingamashumi amathathu (30) zekhalenda emva kokuba sikuthumelele isaziso nge-imeyile okanye kwiintsuku ezingamashumi amathathu (30) zekhalenda emva kokuthumela isaziso sotshintsho kwiNdawo yethu. Olu tshintsho luya kusebenza ngoko nangoko kubasebenzisi abatsha beNdawo yethu. Ukusetyenziswa okuqhubekayo kweNdawo yethu emva kwesaziso solo tshintsho kuya kubonisa ukuvuma kwakho olo tshintsho kunye nesivumelwano esibotshelelwa yimigaqo kunye neemeko zolo tshintsho.
Nceda ufunde esi siVumelwano soLwabiwo ngononophelo. Yinxalenye yesivumelwano sakho neNkampani kwaye ichaphazela amalungelo akho. Iqulethe iinkqubo ze-MANDATORY ABANDING ARBITRATION KUNYE NOKWENZIWA KWENKQUBO YEKLASI.
Ukusebenza kwesiVumelwano soLamlo. Onke amabango neembambano ezinxulumene neMigaqo okanye ukusetyenziswa kwayo nayiphi na imveliso okanye inkonzo enikezwe yiNkampani engenakusonjululwa ngokungacwangciswanga okanye kwinkundla yamabango amancinci iya kusonjululwa ngokubophelela kulamlo lomntu ngamnye phantsi kwemiqathango yesi siVumelwano soLamlo. Ngaphandle kokuba kuvunyelwene ngenye indlela, zonke iinkqubo zolamlo ziya kubanjwa ngesiNgesi. Esi siVumelwano soLamlo sisebenza kuwe nakwiNkampani, nakweziphi na iinkxaso-mali, abaxhasi, iiarhente, abaqeshwa, abo bangaphambili kwimidla, abalandela emva kwabo, kunye nokunikezela, kunye nabo bonke abasebenzisi abagunyazisiweyo okanye abangagunyaziswanga okanye abaxhamli beenkonzo okanye iimpahla ezinikezelwe phantsi kweMiqathango.
Imfuno yeSaziso kunye nokusonjululwa kweMbambano ngokungekho sikweni. Ngaphambi kokuba naliphi na iqela lifune ulamlo, iqela kufuneka liqale lithumele kwelinye icala iSaziso esibhaliweyo seMbango esichaza ubume kunye nesiseko sebango okanye impikiswano, kunye nesiqabu esiceliweyo. Isaziso kwiNkampani kufuneka sithunyelwe kuyo legal@exospecial.com. Emva kokuba iSaziso sifunyenwe, wena kunye neNkampani ninokuzama ukusombulula ibango okanye impikiswano ngokungekho sikweni. Ukuba wena kunye neNkampani anizisombululi ibango okanye imbambano phakathi kweentsuku ezingamashumi amathathu (30) emva kokuba iSaziso sifunyenwe, naliphi na iqela linokuqalisa inkqubo yolamlo. Isixa-mali saso nasiphi na isixa-mali sokuhlawula esenziwe lilo naliphi na iqela alinakubhengezwa kumlamli de kube emva kokuba umlamli emisele isixa sebhaso elo naliphi na iqela linelungelo.
Imigaqo yoLamlo. Ulamlo luya kuqaliswa nge-American Arbitration Association, umboneleli ongomnye osekiweyo wokusombulula iingxabano obonelela ngolamlo njengoko kuchaziwe kweli candelo. Ukuba i-AAA ayifumaneki ukulamla, amaqela aya kuvuma ukukhetha omnye uMboneleli we-ADR. Imigaqo yoMboneleli we-ADR iyakulawula yonke imiba yolamlo ngaphandle kokuba loo migaqo ingqubana neMiqathango. I-AAA Consumer Arbitration Rules elawula ulamlo ifumaneka kwi-intanethi kwi-ADR.org okanye ngokubiza i-AAA kwi-1-800-778-7879. Ulamlo luya kuqhutywa ngumlamli omnye, ongathathi hlangothi. Nawaphi na amabango okanye iimbambano apho isixa sisonke sebhaso elifunwayo lingaphantsi kwamawaka alishumi eedola zase-US (US $10,000.00) zingasonjululwa ngokubophelela ulamlo olusekelwe kwimbonakalo, xa kukho ukhetho lweqela elifuna isiqabu. Kumabango okanye iingxabano apho isixa sisonke sebhaso elifunwayo liShumi lamawaka eedola zase-US (US $10,000.00) okanye ngaphezulu, ilungelo lokuchophela ityala liya kumiselwa yiMithetho yoMlamlo. Naluphi na udliwano-ndlebe luya kubanjelwa kwindawo ephakathi kweemayile ezili-100 ukusuka kwindawo ohlala kuyo, ngaphandle kokuba uhlala ngaphandle kwe-United States, kwaye ngaphandle kokuba amaqela avumelana ngenye indlela. Ukuba uhlala ngaphandle kwe-US, umlamli uya kunika amaqela isaziso esifanelekileyo somhla, ixesha kunye nendawo yazo naziphi na iingxoxo zomlomo. Nasiphi na isigwebo esinikwe ngumlamli singangeniswa kuyo nayiphi na inkundla yolawulo olufanelekileyo. Ukuba umlamli ukunika ibhaso elikhulu kunesithembiso sokugqibela sokuhlawula esenze kuwe yiNkampani phambi kokuqaliswa kolamlo, iNkampani iya kukuhlawula ibhaso elikhulu okanye i-$2,500.00. Iqela ngalinye liya kuthwala iindleko zalo kunye neentlawulo ezivela kulamlo kwaye liyakuhlawula isabelo esilinganayo semirhumo kunye neendleko zoMboneleli we-ADR.
Imigaqo eyongezelelweyo yoLamlo olungabonakaliyo. Ukuba ulamlo olungalunganga olubonakalayo lonyulwe, ulamlo luya kwenziwa ngomnxeba, nge-Intanethi kunye / okanye ngokusekwe kuphela kwiziphakamiso ezibhaliweyo; indlela ekhethekileyo iya kukhethwa liqela eliqala ulamlo. Ulamlo aluzukubandakanya inkangeleko yobuqu ngamaqela okanye amangqina ngaphandle kokuba kuvunyelwene ngenye indlela ngamaqela.
Imida yexesha. Ukuba wena okanye iNkampani ilandela ulamlo, inyathelo lokulamla kufuneka liqaliswe kunye / okanye lifunwe ngaphakathi komthetho wokuncipha nangaphakathi kwawo nawuphi na umhla obekiweyo obekwe phantsi kweMithetho yeAAA yebango elifanelekileyo.
Igunya loMlamli. Ukuba ulamlo luqalisiwe, umlamli uya kuthatha isigqibo ngamalungelo kunye noxanduva lwakho kunye neNkampani, kwaye impikiswano ayizukudityaniswa neminye imicimbi okanye idityaniswe namanye amatyala okanye amaqela. Umlamli uya kuba negunya lokunika isindululo sokuba yonke into okanye inxenye yala mabango ilahlwe. Umlamli uya kuba negunya lokunikezela ngomonakalo wemali, kwaye anike naluphi na unyango olungelomali okanye uncedo olufumanekayo kumntu ophantsi komthetho ofanelekileyo, iMigaqo yeAAA, kunye neMigaqo. Umlamli uya kukhupha ibhaso ebhaliweyo kunye nengxelo yesigqibo echaza iziphumo ezibalulekileyo kunye neziphetho elisekwe kuzo ibhaso. Umlamli unegunya elifanayo lokunikezela ngoncedo kumntu ngamnye elinokuthi libe nalo ijaji kwinkundla yomthetho. Ukunikezelwa komlamli kugqityiwe kwaye kuyabophelela kuwe nakwiNkampani.
Ukurhoxiswa kweTyala leJury. AMAQELA AQINISEKISA AMALUNGELO AMABANDLA KOMGAQO-SISEKO KUNYE NESITATIMENDE OKUYA KWINKUNDLA AZE AZE ITHETHO PHAMBI KWEJaji okanye iJaji, endaweni yokunyula ukuba onke amabango neembambano ziya kusonjululwa ngokulamla phantsi kwesi siVumelwano soLamlo. Iinkqubo zokulamla ziqhelekile, zisebenza kakuhle kwaye zibiza kakhulu kunemigaqo esebenzayo kwinkundla kwaye ziphantsi koqwalaselo olunqongopheleyo lwenkundla. Kwimeko apho nasiphi na isimangalo sinokuvela phakathi kwakho kunye neNkampani nakweyiphi na imeko okanye inkundla yomanyano kwisimangalo sokuphuma okanye sokunyanzelisa imbasa yomlamli okanye ngenye indlela, WENA NENKAMPANI WANIKELA WONKE AMALUNGELO KWI-JURY TRIAL, endaweni yoko ukhetha ukuba imbambano isonjululwe. ngumgwebi.
Ukuyekiswa kweKlasi okanye iZenzo eziHlanganisiweyo. Onke amabango kunye neembambano ngaphakathi komda wale mvumelwano yolamlo kufuneka zixoxwe okanye zihlawulwe ngokwamntu hayi ngokweklasi, kwaye amabango angaphezulu komnye wabathengi okanye umsebenzisi akanakho ukulamla okanye aphikiswe ngokudibeneyo okanye adityaniswe nalawo nawuphi na umthengi okanye umsebenzisi.
Imfihlo. Yonke imiba yenkqubo yolamlo iya kuba yimfihlo ngokungqongqo. Amaqela ayavuma ukugcina imfihlo ngaphandle kokuba umthetho uyalela njalo. Lo mhlathi awunakuthintela iqela ekungeniseni kwinkundla yomthetho naluphi na ulwazi oluyimfuneko lokunyanzelisa esi siVumelwano, ukunyanzelisa ibhaso lokulamla, okanye ukufuna ukukhululeka ngokungalinganiyo okanye ngokulinganayo.
Ubunzima. Ukuba nayiphi na indawo okanye iinxalenye zesi siVumelwano soLamlo zifunyenwe ziphantsi komthetho njengezingekho mthethweni okanye zingenakunyanzeliswa yinkundla yolawulo olunobuchule, loo ndawo inye okanye ezo ndawo azizukusebenza kwaye ziya kusikwa kwaye intsalela yesiVumelwano iya kuthi qhubeka ngokusebenza ngokupheleleyo.
Ilungelo lokuNqaba. Nawaphi na okanye onke amalungelo kunye nemida ebekiweyo kwesi siVumelwano soLamlo inokurhoxiswa liqela ekubhekiswe kulo ibango. Ukurhoxiswa okunjalo akuyi kuyeka okanye kuchaphazele naliphi na elinye icandelo lesiVumelwano soLamlo.
Ukusinda kwesiVumelwano. Esi siVumelwano soMlamli siya kusinda ekuphelisweni kobudlelwane bakho neNkampani.
INkundla Yamabango Amancinci. Nangona kunjalo oku kungasentla, inokuba nguwe okanye iNkampani ingazisa isenzo somntu ngamnye kwinkundla yamabango amancinci.
Uncedo olungxamisekileyo olulinganayo. Ngapha koko oku kungasentla, naliphi na iqela linokufuna uncedo olungxamisekileyo olungxamisekileyo phambi kwenkundla karhulumente okanye yenkundla yomdibaniso ukuze kugcinwe imeko ikho kulindwe ulamlo. Isicelo samanyathelo ethutyana asizukuthathwa njengokuyekisa nawaphi na amalungelo okanye uxanduva phantsi kwesi siVumelwano soLamlo.
Amabango awaxhomekekanga kulamlo. Ngaphandle koku kungasentla, amabango okuhlambalaza, ukunyhashwa kweComputer Fraud and Abuse Act, kunye nokunyhashwa okanye ukusetyenziswa gwenxa kwelungelo elilodwa lomenzi wechiza, ilungelo lokushicilela, uphawu lwentengiso okanye iimfihlo zorhwebo aziyi kuxhomekeka kwesi siVumelwano soMlamlo. Kuzo naziphi na iimeko apho esi siVumelwano soLwabiwo sithethe sivumela amaqela ukuba agwebe enkundleni, amaqela ayavuma ukungenisa kulawulo lobuqu lweenkundla ezibekwe ngaphakathi kwiphondo laseLouisiana, ngeenjongo ezinjalo.
Isiza sinokuxhomekeka kwimithetho yolawulo lokuthumela ngaphandle yase-US kwaye sinokuxhomekeka kwimithetho yokuthumela ngaphandle okanye yokungenisa kwamanye amazwe. Uyavuma ukuba ungathumeli kwelinye ilizwe, uphinde uthumele kwelinye ilizwe, okanye ugqithisele, ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo, nayiphi na idatha yobuchwephesha yase-US efunyenwe kwiNkampani, okanye naziphi na iimveliso ezisebenzisa idatha, ngokuchasene nemithetho okanye imimiselo yokuthumela ngaphandle yaseUnited States.
Ukuba ungumhlali waseKhalifoniya, ungaxela izikhalazo kwiYunithi yoNcedo lweSikhalazo yeCandelo leMveliso yoMthengi yeSebe laseCalifornia leMicimbi yabaThengi ngokuqhagamshelana nabo ngembalelwano e-400 R Street, Sacramento, CA 95814.
Unxibelelwano ngombane. Unxibelelwano phakathi kwakho neNkampani lusebenzisa iindlela ze-elektroniki, nokuba usebenzisa iSiza okanye usithumela ii-imeyile, okanye nokuba izithuba zeNkampani zizisa kwiSiza okanye zinxibelelana nawe nge-imeyile. Ngeenjongo zesivumelwano, (a) uyavuma ukufumana unxibelelwano oluvela kwiNkampani ngendlela ye-elektroniki; kwaye (b) uyavuma ukuba yonke imiqathango kunye neemeko, izivumelwano, izaziso, ukutyhilwa kunye nolunye unxibelelwano olunikwa yiNkampani kuwe ziyanelisa ngombane naziphi na izibophelelo zomthetho ezinokwanelisa ezo zonxibelelwano ukuba bezikwikopi ebhaliweyo.
Imiqathango iphela. Le Miqathango ibandakanya sonke isivumelwano phakathi kwakho kunye nathi malunga nokusetyenziswa kweSiza. Ukusilela kwethu ukusebenzisa okanye ukunyanzelisa naliphi na ilungelo okanye ulungiselelo lwale Miqathango akusayi kusebenza njengokurhoxisa elo lungelo okanye ilungiselelo. Izihloko zecandelo kule Miqathango zezoncedo kuphela kwaye azinasiphumo somthetho okanye sekhontrakthi. Igama elithi "kubandakanywa" lithetha "kuquka ngaphandle kokunciphisa". Ukuba naliphi na ilungiselelo lale Miqathango libanjwe njengelingasebenziyo okanye alinakunyanzeliswa, amanye amalungiselelo ale Miqathango awayi kuchaphazeleka kwaye ilungiselelo elingasebenziyo okanye elinganyanzelisiyo liya kuthathwa lilungisiwe ukuze libe semthethweni kwaye linyanzeliswe ukuya kuthi ga kwinqanaba eliphezulu elivunyelwe ngumthetho. Ubudlelwane bakho neNkampani bobo kontraka ozimeleyo, kwaye akukho qela liyiarhente okanye iqabane lelinye. Le Miqathango, kunye namalungelo akho kunye nezibophelelo zakho apha, ayinakwabelwa, iphantsi kwekontraka, inikezelwe, okanye ngenye indlela idluliselwe nguwe ngaphandle kwemvume ebhaliweyo yeNkampani yangaphambili, kwaye nakuphi na ukuzama ukwabelwa, ikontrakthi engaphantsi, unikezelo, okanye ukudluliselwa ngokuchasene noku kungasentla kuya kuba lilize kwaye elilize. Inkampani inokunika le Miqathango ngokukhululekileyo. Imigaqo nemiqathango ecaciswe kule Miqathango iyakubophelela kwababelweyo.
Ulwazi ngophawu lwentengiso. Zonke iimpawu zorhwebo, iilogo kunye namanqaku enkonzo aboniswe kwiSayithi yipropati yethu okanye ipropati yabanye abantu besithathu. Awuvumelekanga ukusebenzisa la manqaku ngaphandle kwemvume yethu ebhaliweyo kwangaphambili okanye imvume yomntu wesithathu onokuba ngabanikazi bamanqaku.
Ngayo nayiphi na imibuzo malunga nale polisi, nceda uqhagamshelane legal@exospecial.com nangaliphi ixesha.